Soomaaliya: RW Khayre oo ku wajahan Jowhar
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa in uu maanta ka qayb galo munaasabada Caleemo saarka loo sameynayo Madaxweynaha maamulka HirShabeele Maxamad Cabdi Waare.
Xafladaan oo ka dhici doonta magalaada Jowhar ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda maamulada Soomalida (Puntland, Galmudug, Jubaland iyo Koonfur Galbeed) iyadoo ku soo beegmeysa xilli uu wanaagsaneyn xiriirka u dhexeeya Dowlada dhexe iyo dowlada xubnaha ka ah nidaamka Federaalka ah.
Madaxweynaha Dowlada Federaalka ayaa isagu safar dalka dibadiisa ugu maqan isagoo booqasho ku maraya dalalka ciidmadu ka joogaan Soomaaliya.
Mudane Farmaajo ayaa isagu ka qayb galay munaasabadii caleemo saarka Madaxweynaha Galmudug taasoo ka dhacdey magalaada Cadaado.
Waa markii ugu horeysay ay kulmaan madaxweynayaasha maamulada iyo Khayre tan iyo intii uu soo shaac baxey khilaafka u dhexeeya Dowlada dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlad Federaalka ah.
GAROWE ONLINE kala soco waraka la xiriira munasabdaan anagoo isku dayeyna in wariyaheena ku sugan Jowhar nala socodsiiyo sida ay u dhaceyso iyo khudbadaha laga jeediyo halkaas.
Soomaliya 21.10.2017. 12:28
Maamul Goboleedyada oo war-murtiyeed kasoo saarey Go'aankii Aqalka Sare
Soomaliya 28.11.2018. 12:29
Galmudug oo qaadacday Shirka uu Farmaajo ku baaqay [Akhri Sababta]
Soomaliya 23.09.2018. 16:24
Madaxweynaha Soomaaliya oo caawa gaarey Cadaado [Dhageyso]
Soomaliya 15.01.2018. 20:51